Android sary | Wallpaper ho an'ny Android | Androidsis
Ataovy miavaka tsara ny Android-nao sary ho an'ny finday sy sary ho an'ny Android. Ny sary an-tsary dia iray amin'ireo singa manokana indrindra amin'ny Android misy anao ary manolotra ny fampisehoana ny fialambolinao, ny tsirony anao na ny fampisehoana mivantana ny sarin'ny olon-tianao. Raha ny zavatra tadiavinao amin'ny rindrambaiko Android tsara tarehy araka izay tratra, eto dia asehonay anao maro izay voalamina isaky ny sokajy.
1 Sintomy ny rindrambaiko Android
2 Ahoana ny fomba hanaingoanao manokana ny findainao amin'ny rindrambaiko Android
3 Ahoana ny fanovana ny sary an-drindrina amin'ny Android
4 Fomba hafa hanovana ny rindrina amin'ny Android
Sintomy ny rindrambaiko Android
Azonao atao ny mametraka ny sarin'ny wallpaper amin'ny android. Ny olana dia raha manao fikarohana amin'ny Internet isika, dia mora ny mahita ny habeny na ny refy tsy mifanaraka amin'ny nantenaintsika. Raha tsy te handany fotoana ianao dia azonao atao ny mijery hatrany ny galerantsika rehefa mitsidika ireto rohy ireto:
Ambany 18: 9
Sary an-tsary biby
Sary an-tsary Anime
Fiaviana malaza sy malaza
Volapoky ny môtô
Volapoky ny solosaina sy ny teknolojia
Sary an-tsary Landscape
Wallpaper an'ny minion
Wallpaper lalao video
Hafa sary an-tserasera
Sary natokana ho an'ny Noely
Ny vola rehetra angonina eto amin'ity tranonkala ity dia fananan'ny mpanoratra azy ireo tsirairay avy. Fantatray fa ny sary rehetra aseho ao androidsis.com Ao amin'ny sehatra ho an'ny daholobe izy ireo ary azo jerena amin'ny Internet. Raha tsy izany dia andefaso izahay a mailaka ary hesorina tsy ho ela ao amin'ny tobim-baovaonay mba hanajana ny zon'ny mpamorona.
Ahoana ny fomba hanaingoanao manokana ny findainao amin'ny rindrambaiko Android
Na dia mety miaraka amina rindrambaiko mbola tadiavintsika aza ny fitaovana Android, dia azo inoana fa te hampiasa background manokana na iray izay mifanaraka kokoa amin'ny toetrantsika isika. Ny zavatra voalohany ataoko raha vantany vao manomboka fitaovana iray aho, na solosaina, takelaka, finday na karazana fitaovana elektronika misy interface-na mpampiasa, dia ny fametrahana ambadika izay tiako indrindra ary na amin'ny solosaina aza no anaovako azy. miova isan'ora. Fa,ny fomba fanovana ny sary an-drindrina amin'ny Android?
Miaraka amin'ny isan'ny kinova samihafa an'ny Android any, dia tsy ho vita mihitsy ny mamaritra ny fizotrany marina ho an'ny fitaovana rehetra, saingy azontsika atao ny manazava sy mampiditra pikantsary momba ny fanaovana azy amin'ny Nexus 5 mihazakazaka Android 6.0.1. Hanazava fomba roa izahay hanao izany mba hahazoana antoka fa misy olona afaka manova ny sary an-tsoratry ny fitaovana Android, ny iray amin'izy ireo amin'ny fomba roa samy hafa handrakofana karazana fitaovana maro kokoa
Ahoana ny fanovana ny sary an-drindrina amin'ny Android
Tsotra be ny fizotrany, saingy fantatray fa ny zavatra mora ho an'ny sasany dia mety ho somary sarotra kokoa ho an'ny sasany, koa manohy amin'ny antsipiriany ireo dingana tokony harahina aho:
Manokatra ny Fikirana fitaovana izahay.
Mandeha amin'ny fizarana «Skrin» izahay.
Ao amin'ny efijery anatiny, miditra «Wallpaper» isika. Amin'ny fitaovana sasany, ny safidy dia mety hiseho fotsiny hoe "Background."
Ao amin'ny fizarana manaraka dia afaka misafidy isika:
Mikaroha ny karatra fitadidiana.
Sary an-tsary an-tsary
Ny archive sary.
Ampidirinay ny faritra izay misy ny sary tiana hampiasaina ary safidinay izany.
Alohan'ny hametrahana ny rindrina vaovao dia afaka manova sanda vitsivitsy isika, toy ny fanapahana ny sary na ny fihodinana azy. Manitsy azy araka izay tadiavinay izahay.
Farany, manaiky izahay.
Amin'ny kinova Android sasany, toy ny 4.4.2 Samsung TouchWiz, ao amin'ny dingana 4 ny safidy hisafidianana raha tiantsika apetraka eo amin'ny efijery an-trano izany, eo amin'ny efijery hidin-trano na eo amin'izy roa dia hiseho mivantana. Aorian'izay dia ho azontsika atao ny manondro hoe aiza no hakana ny sary avy amin'ny galerie background animated, ny wallpaper na ny gallery. Ny ambiny dia mitovy amin'ilay nohazavaina.
Raha nisintona sary lehibe dia lehibe ianao dia hazavainay eto ny fomba fanovana ny famahana ny sary amin'ny fomba tsotra.
Fomba hafa hanovana ny rindrina amin'ny Android
Misy fomba hafa izay no zavatra voalohany heveriko fa tokony andramanao na inona na inona karazana fitaovana Android anananao. Ny momba ny fampiasana hitsin-dàlana: avy amin'ny rool na rindranasa hafa (ao anatin'izany ny mpikaroka rakitra) izay mitahiry na manana fidirana amin'ireo sary. Mba hanovana ny sary an-tsary miaraka amin'ity fomba hafa ity dia tsy maintsy ataontsika izao:
Mizotra mankany amin'ilay sary tianay faritana ho toy ny sary an-tsary, izay mety hiditra ao anaty roul, ny fakantsary, ny Google Photos na aiza na aiza ananantsika.
Manokatra ny sary izahay.
Manindry sy mitazona izahay mandra-pahitantsika ireo safidy azo atao.
Misafidy «Apetraka ho ...».
Safidintsika amin'ireo izay miseho ny safidy tadiavina, toy ny:
Ao amin'ny efijery an-trano ihany.
Amin'ny efijery hidin-trano ihany.
Eo amin'ny efijery an-trano sy eo amin'ny efijery hidin-trano.
Toy ny tamin'ny fomba teo aloha, afaka manova zavatra amin'ny sary isika, toy ny fanapahana azy, manitatra azy sns.
Farany, manaiky ny fanovana izahay.
Azo atao fa raha manana fitaovana somary antitra ianao, ny fanindriana ny sary mandritra ny segondra dia tsy mampiseho safidy. Raha izany no izy dia tsy maintsy soloinao amin'ny hafa ilay izy: kitiho ny bokotra safidy an'ny fitaovanao. Araka ny fantatrao, fitaovana Android maro no manana bokotra telo: ny bokotra lehibe na fanombohana, ny iray mihemotra ary ny fahatelo izay hokasihinay hanehoana ireo safidy azo atao. Izany no bokotra tokony hikasihanao ny dingana 3 amin'ny dingana teo aloha.
Avy aiza ianao sary an-tsary finday? Lazao anay ny momba anao raha ny amin'ny fisintomana sary an-tsehatra sy ny fametrahana sary vaovao Android, iray amin'ireo loharano tsotra sy haingana indrindra hanomezana fiovan'ny endrika finday na takelaka misy antsika.